သက်ကြီးပိုင်းမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ သတိအမေ့လွန်ရောဂါတစ်မျိုး - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သက်ကြီးပိုင်းမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ သတိအမေ့လွန်ရောဂါတစ်မျိုး….
လူတွေဟာ သက်ကြီးပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင် အသက်ကြီးလို့ ရိုးရိုးဟိုမေ့ ဒီမေ့ဖြစ်တတ်တာရှိသလို လုပ်နေကျအလုပ်တွေကိုတောင် မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ သတိအမေ့လွန်ရောဂါ Alzheimer’s ဖြစ်လာကြတာလည်းရှိပါတယ်။ Alzheimer’s ရောဂါဆိုတာဟာ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာရောအပြင်လူမှုဘဝမှာရော တော်တော်များများ မြင်ဖူးကြားဖူးတဲ့ရောဂါပါ။ အဓိကကတော့
ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေတဖြည်းဖြည်းချင်းယိုယွင်းပျက်စီးမှုပိုပိုဆိုးလာလို့ပါပဲ။ ဒီ Alzheimer’s ရောဂါဟာ စစချင်းပိုင်းမှာတော့ လတ်တလောလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေ၊ ခုနလေးတင်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုမေ့တာမျိုးရှိပေမယ့် အခြေအနေပိုဆိုးလာတဲ့အခါ မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းကိုထိခိုက်လာတာ၊ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းတွေကိုပါ ထိခိုက်လာတာ ရှိတတ်ပါတယ်။
♍ ပြောပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါပြောတာ
♍ ပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်မေ့ကုန်တာ၊ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ နာမည်တွေအ လုပ်အကိုင်တွေအားလုံးကြက်ပျောက်ဌက်ပျောက်ဖြစ်သလိုကိုမေ့ကုန်တာ
♍ ပုံမှန်လုပ်နေကျဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေ (ဥပမာ-ကားမောင်းတာ)ကိုမလုပ်တတ်တော့တာ
♍ သွားနေကျနေရာတွေသွားရင်လည်း ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတော့ပဲ လမ်းပျောက်သွားတတ်တာ
♍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် မစဥ်းစားမတွေးခေါ်နိုင်တော့ပဲ မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့တာ
(ဥပမာ- ရာသီဥတုအေးလို့ သူများတွေ ၂ ထပ် လောက်ဝတ်ထားရချိန်မှာ ဘောင်းဘီတိုနဲ့နေနေတာမျိုးတွေ)
♍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်လည်း စိတ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်လွယ်လာတာ၊ တခုခုကိုယုံမှားသံသယ
ဝင်နေတာ၊ လူတွေနဲ့အဆက်အစပ်မရှိတော့ပဲတစ်ယောက်တည်းဖြစ်လာတာ၊ လူတွေကိုမယုံကြည်တော့တာ၊ အိပ်ချိန်တွေပြောင်းလဲလာ တာမျိုးတွေဖြစ် တတ်ပါတယ်။
♍ Alzheimer’s ရောဂါအခြေအနေဆိုးဆိုးလာတာနှေးသွားအောင်ဆေးပေးတာ
♍ Alzheimer’s ရောဂါရှိသူကို ဘဝနေထိုင်မှုအဆင်ပြေအောင် support လုပ်ပေးတာ စတာတွေပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။
ဘယ်လို support လုပ်ပေးသင့်လဲဆိုရင်….
♍ သွားနေကျနေရာကိုတောင် သွားတဲ့အခါ လမ်းပျောက်တာမျိုးမရှိအောင် ဖုန်းထဲမှာ တည်နေရာ ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာ ထည့်ထားတာမျိုး
♍ သတိမမေ့အောင် ချိန်းဆိုထားတဲ့ကိစ္စတွေ၊အရေးကြီးဇယားတွေကို မြင်သာတဲ့နေရာမှာ ချမှတ်ထားတာမျိုး
♍ မှတ်ဉာဏ်ကိုပြန်သတိရအောင် မှတ်ဉာဏ်ကိုကောင်းကောင်းနှိုးဆွပေးနိုင်တဲ့ အမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုထားထားတာမျိုး စတာတွေပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။